Real Madrid oo marmarsiiyo u samaynaysa iibka James Rodriguez – Gool FM
Real Madrid oo marmarsiiyo u samaynaysa iibka James Rodriguez
Liibaan Fantastic July 18, 2016
(Madrid) 18 Luulyo 2016 Kooxda Real Madrid ayaa diyaar u ah inay iska fasaxdo laacibka reer Colombia ee James Rodriguez kaas oo ku dhaqaaqay falal ka caraysiiyay tababare Zidane.
Shabakada dalka Spain ee EcoDiario ayaa baahisay in tababare Zidane uusan la dhicin hab dhaqanka James kadib dhaawicii ka soo gaaray garabka kulamadii Copa America.
Waxaa la filayay in James uu qaliin dhanka garabka ah maro si uu dib ugu soo laabto kooxda bilowga xiliciyaareedka cusub laakiin laacibka ayaa dhagaha ka furaystay codsiga Real Madrid isaga oo siiwatay fasixiisa.
Real Madrid ayaa qorshaynaysa inay iska iibiso James Rodriguez, waxay heshiis cusub ka saxiixeen Marco Asensio, iyaga oo haatan ku sii dhawaanaya dhamaystirka saxiixa laacibka qadka dhexe ee Valencia Andre Gomes.
Andre Gomes ayaa lagu heli karaa aduun dhan 65 milyan oo euro, Real Madrid ayaana si fudud ku bixin karta qiimahaas haddii ay dhamaystirto iibka James Rodriguez.
Yaa noqon doona Kabtanka Arsenal kaddib tagistii Mikel Arteta?